के प्रचण्डले सबैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ठेक्का लिएका हुन् ? « Himal Post | Online News Revolution
के प्रचण्डले सबैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ठेक्का लिएका हुन् ?
प्रकाशित मिति : २०७४, १६ भाद्र १६:३६
२०५२ साल पछि द्वन्दकाल रहुन्जेल सम्म गाउँ देखि सहर सम्म, सुगम देखि दुर्गम सम्म भित्ता भित्तामा एउटा फोटो भेटिन्थ्यो, खाइलाग्दो शरीर सहितको, लालसलाम गरेको, कालो दाह्री सहितको स्केच टाइपको पोष्टर । प्रचण्ड नाम गरेको उक्त फोटो हेरेर मान्छेहरू भन्थे ‘ यो काल्पनिक पात्र हो । ’
प्रचण्ड त्यति बेला प्रचण्डपथका कारण चर्चामा थिए । उनी जनयुद्धमा एउटा काल्पनिक पात्रका रूपमा पनि उत्तिकै चर्चित थिए । सबैको चासो थियो ‘ के साँच्चै प्रचण्ड भन्ने मान्छे छन् त ? ’कल्पना गर्नेहरुले यति सम्म गर्थेकी कहिले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रचण्डको रूपमा कल्पना गर्थे ।
शान्तिप्रक्रिया सुरु भएपछि हालसम्म पनि उनी उत्तिकै चर्चामा छन् , जति जनयुद्ध कालमा थिए । कहिले दुई ठाउँ बाट हारेका माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर त कहिले रुक्मागत कटुवाल काण्डमा फसेर, कहिले भित्ते राष्ट्रपतिको ट्यागले त कहिले पशुपतिको भट्ट ब्राह्मण हटाउने प्रसङ्गले ।
नेपाली राजनीतिका मुखिया जस्तै देखिने यी पात्र एक दशक देखि राजनीतिलाई आफ्नो अँगाडी पछाडि लिएर हिडिरहेका छन् । यस अर्थमा राजनैतिक जस र अपजस पनि उनी आफैले लिनुपर्छ । कतिपय उथलपुथलमा उनी तत्काल हिसाब किताबमा नकारात्मक देखिएपनि दिर्घकालमा सकारात्मक रिजल्ट देखिएका छन् । आँशिक बाहेकका सबै जसो देशसँग जोडिएका विषयमा उनले सफलता हासिल पनि गरेका छन् ।
सुरुमा रुक्मागत काण्डमा पनि उनी दोषी देखिए । त्यस्तै अर्को टट्कारो काण्ड थियो पशुपतिनाथको भट्ट नामको भारतीय पुजारी हटाउने प्रस्ताव । त्यति बेला काँग्रेस र एमालेले भट्ट हटाउने कुराको खेदो खने, यो प्रक्रिया पुरा हुन पनि दिएनन तर पछि यो महत्त्वपूर्ण कदम सफल पारिनुपर्थ्यो भन्ने जनताले विश्लेषण गरे । यी र यस्ता धेरै प्रसङ्गले प्रचण्डलाई अहिले उचाइ दिएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
यति बेला झलनाथ खनालले ऋषि धमलाको कार्यक्रममा बोलेको कुराले बजार तातेको छ, आखिर के थियो त त्यो अभिव्यक्ति ?
“दसैँ पछि सरकार परिवर्तन हुन्छ बामदेब गौतमलाई प्रचण्डले प्रधानमंत्री बनाउँछन ” झलनाथ खनालले उक्त कार्यक्रममा बोलेका एउटा गम्भीर विषय हो यो । झलनाथको यो अभिव्यक्तिले दुई खाले प्रश्न सृजना गरेको छ ।
(१) एमाले भित्र मोर्चाबन्दी भइरहेको छ र प्रधानमन्त्री को सेन्टिमेन्ट देखाएर बामदेवलाइ आफ्नो कित्तामा ल्याउन चाहन्छन ।
(२) प्रचण्ड बाहेक अरूले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दैन ।
एकै छिन पहिलो प्रसङ्गमा बहस गरौँ !
बामदेबलाई प्रधानमन्त्रीको स्वाद चखाउने रणनीति:
एमाले भित्र के पी ओलीबाट रुष्ट केही नेताले एउटा छुट्टै कित्ता तयार गर्दैछन । केपी ओलीलाई कमजोर गराउनको लागि आन्तरिक खेल सुरु भएको धेरै भैसक्यो । यति बेला झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल लगाएतका नेतालाई पार्टीको पहिलो र दोध्रो पंतिबाट साथ चाइएको छ । एमाले भित्र सबैलाई रिझाउने, सम्झाउने खुबी भएका नेता मध्य बामदेव एक मानिन्छन । यो जिम्मेवारी बामदेवले राम्रोसँग निभाउन सक्छन् । यति सम्म कि कुनै समय नेकपा एमालेले प्रचण्डलाई सम्झाउनको लागि पनि बामदेवलाइ प्रयोग गर्थ्यो ।
बामदेव गौतमले अबको प्रधानमंत्रीमा एमाले बाट आफ्नो दाबी रहने कतिपय कार्यक्रममा बताउने गरेका पनि छन् त्यसैले झलनाथले प्रधानमन्त्रीको तुरूप प्रयोग गरेको हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । र अब प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको स्वाद चखाउन बाकी खेलाडी पनि यिनै बाकी छन् जो बरियताका हिसाबले अब पहिलो नम्बरमा पर्नेछन ।
दोस्रो प्रसङ्गमा बहस गरौँ !
नेपाली राजनीतिमा अझै केही वर्ष प्रचण्ड बाहेक अरूले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दैन:
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली राजनीतिको एक चतुर खेलाडीको रूपमा देखिएको त माथि चर्चा भैसक्यो । शान्तिप्रक्रिया सुरु भैसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति गरेका प्रचण्डले एकाएक सहमति तोडे । त्यो राजनीतिलाई घुमाउने एउटा गोटी थियो प्रचण्डको । यसमा बेला बेला उनले आफ्नो महान् गल्ती भनेरै कांग्रेसीहरुको सहानुभूति बटुल्न पछि पर्दैनन् ।
दुई स्थान बाट चुनाव हारेका माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमंत्री बनाएर चकित तुल्याउने अरू कोही नभएर प्रचण्ड नै हुन् । यतिसम्म कि एमालेबाट पछिल्लो समय जति प्रधानमंत्री बने सबैमा प्रचण्डकै हात थियो । झलनाथ स्वयम् प्रधानमंत्रि प्रचण्डकै तिगडमबाट बनेका हुन, के पी ओलीलाई बनाउने पनि उनी थिए । निकट भविष्यमै बामदेबले प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हाले भनेपनि त्यो प्रचण्डकै खेल ठहरिनेछ । यदि यो अर्थमा झलनाथले बामदेवलाई प्रचण्डले नै प्रधानमन्त्री बनाउछन् भन्ने बोलेका हुन् भने नेकपा एमाले भित्र एउटा तहमा यो जगजाहेर छ कि प्रचण्डले यो देशको प्रधानमन्त्री जसलाई पनि बनाउन सक्छन् वा प्रचण्डले बाहेक अरूले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दैन ।
सत्तामा रहदा सम्म या प्रचण्डको इसारामा नाच्दा सम्म प्रचण्डको भजन गाउँने तर प्रचण्डले नचाउन छाडना साथ उनलाई भारतीय लम्पसारबादीको तक्मा भिराउने हरेक दलका शिर्षस्थ नेताहरू यति बेला सत्ता र पदिय लोभका लागी प्रचण्डको कुरालाई नकार्न भने सक्दैनन । सत्ता प्राप्तिको लोभकै कारण एमाले , कांगे्रस अनि राजपा लगायतका साना दल प्रचण्डको एक इसारामा नाच्न थाल्दछन ।
एउटा कुरा के प्रस्ट भएको छ भने अझै दश वर्ष सम्म नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको हालीमुहाली चल्नेछ । उनले जसको टाउकोमा हात राख्नेछन , त्यो सत्ताको स्वाद चाख्न पाउने भाग्यमानी ठहरीने छ ।